Ozi e nyere na Medjugorje na Ọgọstụ 25, 2016 | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ozi enyere Medjugorje na August 25, 2016
di Paolo Tescione - Ọgọstụ 25, 2016
“Ezigbo ụmụaka! Taa achọrọ m isoro gị keta oke n'ọ joyụ nke eluigwe. Mụntakịrị, meghee ọnụ ụzọ nke obi gị ka olile-anya, udo na ịhụnanya nke nanị Chineke na-enye wee tolite n’ime obi gị. Mụaka, unu onwe unu rapara n’uwa na ihe nke ụwa, yabụ Setan na - akpasu unu iwe ka ifufe jiri ebili mmiri nke oke osimiri mee ya. Ya mere, kwe ka ndu nke ndu gi buru nkpuru obi na obi ajuju nke Ọkparam Jisos, nye ya oge gi ka idiri ya rie onu na ihe nlere anya nye ndi ozo. Daalụ maka ịza oku m kpọrọ.